Mofon’aina – ALAROBIA 06 DESAMBRA 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALAROBIA 06 DESAMBRA 2017
6 desambra 2017
1 Rehefa afaka izany, dia hitako fa, indro, nisy varavarana nivoha tany an-danitra; ary ilay feo voalohany izay efa reko dia tahaka ny an’ ny trompetra niteny tamiko hoe: Miakara atỳ, dia hasehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy rahatrizay.2 Ary niaraka tamin’ izay dia voatsindrin’ ny Fanahy aho; ary indro seza fiandrianana nipetraka tany an-danitra, ary nisy Anankiray nipetraka teo ambonin’ ny seza fiandrianana.3 Ary ny tarehin’ ilay nipetraka dia tahaka ny vato jaspy sy karneola; ary avana mitarehin’ emeralda no nanodidina ny seza fiandrianana.4 Ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana efatra amby roa-polo; ary teo ambonin’ ireo seza fiandrianana ireo dia nisy loholona efatra amby roa-polo nipetraka, nitafy fitafiana fotsy sady nisatroka satro-boninahitra volamena.5 Ary nisy helatra sy feo ary kotrokorana nivoaka avy tamin’ ny seza fiandrianana; ary nisy jiro fito nirehitra teo anoloan’ ny seza fiandrianana, dia Fanahy fiton’ Andriamanitra ireo.6 Ary teo anoloan’ ny seza fiandrianana dia nisy toa ranomasina fitaratra tahaka ny vato krystaly; ary teo afovoan’ ny seza fiandrianana sy manodidina azy nisy zava-manan-aina efatra feno maso avokoa ny anoloany sy ny ivohony.7 Ary ny zava-manan-aina voalohany dia tahaka ny liona, ary ny zava-manan-aina faharoa dia tahaka ny zanak’ omby, ary ny zava-manan-aina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan’ olona, ary ny zava-manan-aina fahefatra dia tahaka ny voromahery manidina.8 Ary ny zava-manan-aina efatra dia samy nanana elatra enina avy, sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny; ary tsy mitsahatra andro aman’ alina izy manao hoe: Masina, Masina, Masina ny Tompo Andriamanitra Tsitoha, Ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy.
APOKALYPSY 4 :1-8
MANOKATRA NY LANITRA I JESOA KRISTY
1-Mipetraka eo amin’ny seza fiandrianany mandrakizay i Jesoa Kristy.
Famirapiratan’ny voninahiny sy ny fahasoavana ary ny fitsarany ny endriny (and 3). Izy no miantso an’i Jaona Apostoly hiakatra any an-danitra sy nampiseho ny zavatra tsy maintsy ho avy rahatrizay ary mampanoratra izany .Fahefan’i Jesoa Kristy no manome ny teny faminaniana sy miantso ny olona hiakatra any aminy rehefa avy nanokatra ny lanitra Izy ( jereo Ezek 1 :1; Mat 3 :16 ; Asa 10 :56) . Izay nambaran’i Jesoa dia tsy maintsy ho tanteraka. Antsoin’i Jesoa Kristy any aminy ireo tiany sy nofidiny.
2-Manome voninahitra an’i Jesoa ny voavonjy
Manodidina an’i Jesoa Kristy « Ilay Tompo Andriamanitra Tsitoha , Ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy » ny olom-boavonjy araka ny Testamenta vaovao . Any amin’izay itoeran’i Jesoa Kristy no itoeran’izy ireo sady « hiara-manjaka Aminy » (and 4; Jao 14 :3 ; 17 :24 ; 2 Tim 2 :12) . Efa notafian’ny Tompo fitafiana sy nampisatrohana voninahitra ireo .Miombona ao amin’i Kristy ny olom-boavonjy ary ny Fanahy Masina dia ny Fanahin’ Andriamanitra no mampiaina ao amin’ny fanjakan’i Kristy. Manodidina an’i Kristy ny fiangonana any an-danitra tahaka ny anjely serafima (Jereo Isaia 6 :2). Midera sy manome voninahitra ary miray feo ka miankohoka amin’Ilay Tompo Mpamonjy azy izy rehetra. Tohizo ny fanompoanao ny Tompo fa tsara izany.
Inona no tombotsoan’ny mpino an’i Jesoa Kristy ?
Mofon'aina - TALATA 05…